Iincwadi eziMnandi kwiMbali yeBalkan
Bambalwa abantu abayayiqonda imbali yaseBalkan, nangona indawo iyona nto ihamba phambili kwiindaba zethu kwixesha elishumi elidlulileyo; Oku kuqondakalayo, ngesihloko sinzima, ukudibanisa imiba yenkolo, ezopolitiki kunye nobuhlanga. Ukhetho olulandelayo ludibanisa iimbali eziqhelekileyo zeBalkans ngezifundo ezigxila kwimimandla ethile.
I-Balkans iyintandokazi yeendaba, emva kokufumana indumiso kwiinkcukacha ezininzi: zonke zifanelekile. UGlenny uchaza imbali yembali engummangalo ngokulandelelana okulukhuni, kodwa isitayela sakhe sinamandla kwaye irejista yakhe ifanelekile kuyo yonke iminyaka. Wonke umxholo omkhulu uxoxwa ngawo kwinqanaba elithile, kwaye ingqwalasela ethile ihlawulwa kwingxenye eguqukayo yeBalkans eYurophu ngokupheleleyo.
I-Slim, engancinci, kodwa inokubaluleka kakhulu, le ncwadi yiyona ntetho ecacileyo kwimbali yeBalkan. I-Mazower ithatha inkulu, ixoxa ngeendawo, ezopolitiko, iinkolo kunye neentlanga eziye zasebenza kulo mmandla ngelixa zonakalisa ezininzi iingcinga. Le ncwadi ihlalutya kwiingxoxo ezibanzi, ezifana nokuqhubeka kunye nelizwe laseByzantine.
Le ngqokelela yamaphupha ebalabala angama-52, ephethe izihloko kunye nabantu abavela kwiminyaka eyi-1400 ye-Balkan imbali, yayiza kuba ngumlingane ofanelekileyo kuyo nayiphi na imisebenzi ebhaliweyo, kunye neenkcukacha eziqinileyo zezifundo. Umthamo uquka imephu yenkcazo yemithombo kunye nejografi yesiseko, kwakunye neetekisi ezihambelanayo.
Uluhlu lweencwadi kwiBalkans ludinga ukuba lukhangele eSerbia, kwaye incwadi kaTim yakwaYuda inomxholo othi "Imbali, Inkolelo kunye nokutshatyalaliswa kweYugoslavia." Lo ngumzamo wokuvavanya oko kwenzekayo kunye nendlela eye yachaphazela ngayo amaSerbia, kunokuba nje ukuhlaselwa kwamatyala.
Isihloko sivakala sivalo, kodwa abacuki abasemthethweni bawaphulaphuli beemfazwe ezivela kwiiMfazwe zeYugoslavia yangaphambili, kwaye eli bali elibuhlungu lichaza indlela abanye abaye bayilandela ngayo kwaye baphela enkundleni. Ibali lezopolitiko, ulwaphulo-mthetho kunye nokuhlola.
Umxholo unika umxholo wale ncwadi: Ukunqotshwa kwe-Ottoman yeSouth-mpuma yeYurophu (i-14th-15th century). Nangona kunjalo, nangona umthamo omncinci upakisha ubuninzi beenkcukacha kunye nobubanzi bolwazi, ngoko uya kufunda malunga nangaphezulu nje kweeBalkan (ezibacaphukisa abantu emva kwe-Balkan nje.) Isiqalo sokuba indlela yeshumi inkulungwane yenzeka.
Ukusebenza kumgangatho ophakathi phakathi kwencwadi enkulu kaMisha Glenny (khetha 2) kunye ne-Mazower efutshane (khetha 1), le ngenye ingxoxo enomxholo ophezulu, ehlanganisa iminyaka eyi-150 kwimbali yaseBalkan. Kanye kunye neengqungquthela ezinkulu, i-Pavlowitch ihlanganisa amazwe ngamnye kunye nomxholo waseYurophu kwisitayela sakhe esifundekayo.
Nangona kungenamandla, le mqulu iyancipha kwaye ifaneleke kakhulu kulabo basebenzileyo ekufundeni (okanye nje ngokulandela intshisekelo eqinile) kwiBalkans. Ingqwalasela ephambili yesazisi kazwelonke, kodwa izifundo eziqhelekileyo nazo ziqwalaselwa. Umqulu wesibini ubhekisana nekhulu lemashumi mabini, ngakumbi i-Balkan ne-Second World wars, kodwa iphetha ngawo-1980.
Ngenxa yokuxakeka kwembali yaseYugoslavia yakutshanje, uya kuxolelwa ngenxa yokuba unomxholo ocacileyo wawungenakwenzeka, kodwa incwadi kaBenson ibalulekileyo, equka iziganeko ezinje nje ngokubanjelwa kukaMilosevic phakathi nonyaka ka-2001, icacisa ezinye zeembali zamandulo zembali kwaye zinika isingeniso esihle kwixesha elidlulileyo lelizwe.
Ukujongwa kumfundi wezinga eliphezulu ukuya kwizinga eliphezulu kunye nomsebenzi wezemfundo, umsebenzi kaTolorova ngowomnye umlando jikelele kwilizwe laseBalkan, ngeli xesha ngokugxininiswa kwesazisi kazwelonke kuloo mmandla.
Nangona ndincoma le ncwadi kunomntu onentshisekelo eYugoslavia, ndiyakhuthaza nabani na ngokungathandabuzekiyo malunga nokuba yixabiso okanye isicelo esisebenzayo, kwimbali yokuyifunda. Ilampe ixoxa ngexesha elidlulileyo leYugoslavia ngokubhekiselele kokuwa kwelo xesha, kwaye olu hlobo lwesibini lubandakanya izinto ezongezelelweyo kwiimfazwe zaseBosnia naseCroatia.
Imfazwe Yehlabathi Yanye yaqala kwiBalkans kwaye le ncwadi iqhubela kwizenzakalo kunye nokusebenza kuka-1914. Kutyholwa ngokuba nenqabileyo yaseSerbia, kodwa kusengcono ukufumana imbono yabo nangona ucinga ukuba yenzayo, kwaye inceba inokuhlambulula iphepha lokukhululwa.
Umbutho waseMerika waseMerika
Isihlandlo seMibutho yaseRussia: Imfazwe ka-1914 - 1916
Ngaba Ndingumdala Ukuze Ndifunde IsiSpanishi?
I-15 enkulu kakhulu yeBatman Yehlabathi iMfazwe II
I-UC Riverside Admissions
Ngaba Unokuthi Ufake kwiCarbrid Car?
Umxholo we-Ed Bickert
I-Gemini Ilanga kunye neMpawu zeNyanga
Indlela Yokuphumelela Intliziyo Yowesifazane WaseTaurus